Kitapom-batsy manao fantsom-boaloboka milamina 420D 210D Polyester Drawstring Gym Bag miaraka amin'ny Logo
Izahay dia mpamatsy kitapo eco matihanina any Shina ary mihoatra ny 10 taona hatramin'ny nivarotantsika ny vokatra voalohany ho an'ny fanao, ny vokatra dia hatramin'ny kitapo tsy misy tenona, kitapo vita amin'ny landihazo, kitapo mangatsiaka vita amin'ny ins, g, kitapo fisintomana sns.
Custom Zipper Foldable Non Woven Foldable Suit Clothing Cover Bag Black Polypropylene Non Woven Garment Bag Wholesale
Fitaovana Premium: Ireo kitapo fitafiana ireo dia vita amin'ny fiarovana ny tontolo iainana lamba tsy tenona miaraka amin'ny rip-mahatohitra, mahatohitra rano, malefaka ary mifoka rivotra. Namboarina haharitra izy io ary mampanantena ny hiaro ny akanjonao amin'ny fotoana rehetra.
Arovy amin'ny vovoka: afaka miaina ireo kitapo fitafiana ireo kanefa mitazona ny akanjo toy ny palitao volom-borona sy palitao hoditra voaaro sy voatahiry.
Zipper namboarina 6 inch 8inch tsy voatenona mitazona bag vaovao orange tsy voatenona kitapo fitehirizana hafanana Portable Picnic Lunch vaovao mitazona kitapo
1. Farito araka izay ilainao ny kitapo hafanana anao;
2. Manolotra anao ny fahalalana izahay, mba hahafahanao manapa-kevitra, Tsy manam-paharoa ka te hanana iray ny olon-drehetra;
-Fidio ny fitaovana sy ny loko. -Fidio ny famolavolana / habe. -Fidio ny LOGO / sary tianao.
3. Fitaovana: -Tsy polypropylene tsy tenona, PP voatenona, Polyester;
4. Karazana: Double-tànana;
5. Karazana fanidiana: Top Opening;
6. Mitondra enta-mavesatra: 5-10 kg;
Zipper Pink Blue Nonwoven Thermal Bag dia mivoaka ny kitapo mofomamy an-dranomasina tsy misy lamba mitafy ho an'ny sakafo
1. Fitaovana: volon'ondry tsy voatenona & perla, na namboarina;
2.Size: habe namboarina;
3. Loko: fotsy, mainty na namboarina arakaraka ny angatahinao;
4. Logo: sary namboarina
5. Fanontana: pirinty lamba vita amin'ny landy, fanaovana pirinty amin'ny foil ary fanontana hafanana, fanontam-pirinty fanonerana hafanana, Fanontana nomerika, sns;
Bolsa de Alimentos Zipper White Lunch Cooler Bag Insulation Fold Picnic Portable Food Bag Bag Sakafo Thermal
Ny kalitao avo indrindra dia tonga faha-1; ny fanohanana no lohalaharana; fiaraha-miasa dia orinasa ”dia ny filozofianay momba ny orinasan-tsika izay dinihina matetika sy arahin'nny fikambananay ho an'ny New Fashion Design ho an'ny China Customised Logo Insulated Thermal Lunch Cooler Bag, mino izahay fa mampiavaka anay amin'ny fifaninanana izany ary mahatonga ny mpanjifa hisafidy sy hatoky anay. Izahay rehetra dia maniry ny hanao fifanarahana fandresena-fandresena amin'ireo mpanjifantsika, koa antsoy izahay anio mba hahazo namana vaovao!
Fampiroboroboana volo vita amin'ny landy volom-bavy mainty fampiroboroboana Satin Bag
Loko: voajanahary, ivoara, fotsy, fotsy, mainty, manga, mena, mavo, maitso, volomparasy sns.
Size: 5 × 7 cm 7 × 9 cm 9 × 12 cm 10 × 15 cm 13 × 18 cm 15 × 20 cm 20 × 20 cm 20 × 25 cm 25 × 30 cm 30 × 40 cm 40 × 50 cm 50 × 60 cm 50 × 70 sm 60 × 60 cm sns. (Azo namboarina daholo ny habeny)
Logo: fanontana vita amin'ny lamba landy, emboss, fanombohana mafana, amboradara, marika tenona, marika taratasy sns.
Fampiasana: fonosana fanomezana, ho an'ny firavaka, tavoahangy, boky, haingo Krismasy sns.
Kitapo fitehirizana pensilihazo vita amin'ny lamba rongony fotsy tsy manam-paharoa kitapom-batsy zipper kitapo kanto kanto Wallet
Fitaovana mahafinaritra: vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba avo lenta, maivana, malefaka ary maharitra, tsy mora tomany, mandeha tsara ny zipera ary ny kitapo dia mahatsapa fa haharitra ela be.
Quantity sy Size: fonosana namboarina, izy ireo dia ny habeny mety hitahiry ireo entana makiazy tianao indrindra ao anaty poketranao na ao anaty kitapo duffle mandritra ny dia amin'ny faran'ny herinandro.
Anaran-javatra Kitapom-boanjo legioma vita amin'ny voankazo manokana
Size 1) Haben'ny stock
2) habe namboarina
loko 1) Loko stock
2) loko namboarina
Anaran'ny vokatra Nordic Style Eco Friendly Hanging Cotton Mesh Recycle Shopping Bags Canvas Shopping Bag
soson'ny tsy misy
Loko Izay loko pantone; HTML Hex Color Codes
Kitapo miantsena vita amin'ny lamba rongony vita amin'ny lamba canvas azo ampiasaina miverina Mack Tote bag
Ahitana fonosana: kitapo fivarotana varotra elastika miisa 2 azo ampiasaina
Size: 41x41cm, azo ampanjifaina
Fitaovana ara-tontolo iainana: vita tamin'ny 100％ landihazo voajanahary, azo ampiasaina indray ary tsy misy fofona, ampiasao ity kitapo ity mba hamokarana fako kely sy kely kokoa plastika, milina azo hosasana amin'ny rano mangatsiaka
Mahay mandanjalanja sy marokoroko: Mahinjitra tokoa, na dia ampy hamoritra ny haben'ny paosinao aza ireo kitapo ireo, saingy mahazaka